Negesi noma cooker kagesi - a ngemfanelo njalo ikhishi. Omuny, okhokhela eziningi ukupheka isikhathi sakusihlwa, kubalulekile ukukhetha imishini esifanele acabangele izindleko-kahle, lula ukusetshenziswa, ukusebenza. I enhle kungaba kuhhavini "Electrolux", okuyinto hlala ebalulekile ekhishini.
kuhhavini kagesi oluqanjwe Electrolux, eyakhelwe ngaphakathi ekhishini Imishini, kuba Amatebhe, ifakwe i annular Ukushisa isici. Kuhhavini ihlinzeka emsebenzini ivangeli lenhlanzeko. Ngaphezu kwalokho, asikho isidingo ukusebenzisa scrapers akhethekile zokuhlanza. Lena sibonga kungenzeka inkinobho ekhethekile esizihlanzayo, okuyinto likuvumela ukuthi ususe ngokushesha ungcwecwe ngengxube Izinsalela ukudla. Kuhhavini uqobo uyakwazi yokunikhumbuza isignali ukuthi idinga yokuhlanza.
Noma yimuphi Omuny bayowuthokozela by ekuzuzeni kuhhavini "Electrolux", ngoba kukuvumela ukuba ubonise amathalenta Culinary, ifakwe elula touch control. Ninety nemiyalelo babeka phansi imenyu, usizo, kukhona nesishiyagalombili izindlela bafudumale. Isibonisi LCD lungangamela izinga lokushisa, amandla ezingeni nokupheka isikhathi ukudla. Kuhhavini ikuvumela ukuba ukhethe elilungile kakhulu ngawe ukupheka uhlelo bese uqale ngayo okukodwa "Uhlelo wami". Ngaphezu kwalokho, kukhona ithuba ukudala isimiso sabo. umthamo kuhovini ayisikhombisa nane amalitha. Iminyango ukuvula ngokushelela futhi noiselessly.
Ukusebenzisa kuhhavini "Electrolux", ungathola ukudla okumnandi ukuthi zinhle ngokuphelele propecheny bevela kuzo zonke izinhlangothi. Futhi ungakwazi ufake isidlo ibhalwe kunoma yiliphi izinga kuhhavini, kuzosithinta nombala, sibonga fan kanye imbobo emoyeni. Ukuze izinzuzo ababaliweyo kubo, kuhhavini, ungakwazi ukwengeza amandla ayo kahle, lokho ngisho idlula Class A zikagesi energy ukusetshenziswa. Lokho kwenza lo mphumela ebukhoneni kungena egumbini elingaphakathi esihle zihlale zifudumele, okuvumela engeziwe ukuze ifudumale, futhi umnyango ne ingilazi laminated. Nale kuhhavini "Electrolux" uthola ukuvikelwa ngokwengeziwe, okuvumela ukulondoloza ukushisa. Ukusebenzisa idivayisi esivumelana kakhulu futhi ephephile. Phela, umnyango wakhe ngesikhathi yokupheka uhlala epholile futhi akabi ezandleni zakho. Uma umndeni unezingane, awukwazi banovalo lokuthi bazokwazi ukuvula i-kuhhavini ngaphandle kwemvume omdala. Kukhona umsebenzi okhethekile "ukuvikelwa kwezingane". Umshini Electrolux inkampani futhi has imisebenzi eyengeziwe ezivumela, isibonelo, ukuze unqume ukulungela izitsha. Ngenxa yale njongo ukuba kwenziwe uphenyo ipayipi.
Abathengi ukhetha "Electrolux" ubuchwepheshe, kuhhavini lenkampani adunyiswe wabiza ukhululekile kakhulu futhi zisebenza kahle. It ikuvumela ukuba ukupheka izinga ukudla, kulula ukuhlanza, ukunciphisa isikhathi yokupheka. Olukhulu ukubhaka. Abathengi efana khona eziko usethe izici ewusizo, idizayini enhle, ngakho wazwakalisa ukugculiseka ngokuthenga yimpumelelo.
Uma uthenga kuhhavini Electrolux, kuyoba balahle umsebenzi onzima bazokwazi ukuhlinzeka umndeni wakho nge izitsha okumnandi kakhulu, ifaniswe ne imenyu yokudlela, futhi musa uzisole imali wachitha. Phela, ikhishi lakho kuyoba yithuluzi elihle futhi zibalulekile - kusukela ngokuqinile Electrolux kuhhavini!
Ukuhlela ukukhulelwa, kuphi ukuqala? Uhlu Luhlolokulinganisa lwetivivinyo neluhlolo.
Izaqathe ezibabayo nezomuncu eKorea ebusika: ukulungiswa kwesinyathelo ngesinyathelo